7 Guulood Iyo 25 Gool – Napoli Oo Ku Jirta Marxaladii Ugu Fiicnayd | Himilo Media Group
Kooxda Napoli ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay taariikhda horyaalka Seria A ee badisa dhamaan todobadii kulan ee ugu horeeyey xili ciyaareedka, isla markaana 25 gool dhalisa – waxaanay ciyaarii u dambeysay ku garaaceen naadiga Cagliari.
Marek Hamsik ayaa hogaanka ugu dhiibay gool uu ka xareeyey masaafo lix yards ah – goolkiisii 114 aad ee uu Napoli u dhaliyo, isagoo hal gool oo kaliya ka hooseeya tirada goolashii uu naadiga u saxeexay halyeygii reer Argentina ee Diego Maradona o haysta rikoodhka kooxda.
Dries Mertens ayaa ku labeeyey kubad rigoodhe ah oo loo dhigay waxaana goolka saddexaad giftinka shabaqa ka xareeyey Kalidou Koulibaly.
Juventus ayaa kula biiri karta dhibcaha 21 ka ah ee ay haystaan haddii ay karbaashaan kooxda Atalanta oo ay caawa ciyaar u balan san yihiin.
Roma ayaa 10 ciyaarood oo xidhiidh ah badisay rikoodhkaasna xidhay xili ciyaareedkii 2013-14 laakiin dhaliyey 20 gool todobadii kulan ee ugu horeeyey. Xili ciyaareedkaasna waxay ku dhamaysteen iyagoo 17 dhibcood ka hooseeya kooxdii horyaalka qaaday ee Juventus.